संभोगको भोग गर्न नपाएका बिवाहित महिला – Sawal Nepal
२५ भाद्र २०७६, बुधबार ०६:२५
उ अफिसमा काम गर्छे, लोग्ने र छोरीको पनि राम्रै ख्याल राखेकी छ, बुढाबुढीमा हुनुपर्ने सबै ब्यवहार सामान्य छ । दुवै पट्टीका परिवारका प्रिय बुहारी ज्वाईं हुन् । पैसा छ, सुविधा छ सबै राम्रो छ तै पनि उसले पछिल्लो समय पटक-पटक यो कुरा दोहोर्याईरहेकी छ । उ शिक्षित महिला हो, श्रीमानलाई चौपट्टी माया गर्छे, तर पनि उ खुशी छैन भन्ने अर्थमा समाजले त उसलाई चरित्र गलत भएकी, सेक्स धेरै चाहिने रहेछ त्यही भएर बुढासंग रिस उठेको भन्न मात्र जानेको छ । लोग्नेलाई उसले यो कुरा राख्नै सक्दिन किनकी उसको श्रीमानले बुझेको सेक्स भनेको लोग्ने मान्छेको विर्य स्खलन मात्र हो त्यसमा स्वास्नीको कर्तव्य लोग्नेको ईसारामा शरिर मिलाउनु मात्र हो ।
अर्को पटकको भेटमा उसको गुनासो फरक देखियो ‘खै यार जिन्दगी बर्वात भयो मेरो त पहिले त सोच्थें सेक्स हाम्रो समस्या हो अहिले आएर लाग्छ यसले मलाई मन नै पराउँदैन मायाँ नै गर्दैन । उसले उदाहरणहरु पेस गर्दा मलाई पनि दिक्दार लाग्यो यो पटक । पछिल्लो पटक भन्न थालेकी छ ‘मलाई झुण्डेर मर्दिउँ जस्तै लाग्छ, छोरीको बिजोग हुन्छ भनेर मात्र हो । यस बिषयमा कुरा गर्न खोज्यो भने उसले असले उल्टो कसको आड पाएर म संग निउँ खोजेकी छस् भनेर बखेडा गर्छ । अथवा कसले सिकायो तलाई भनेर शंका गर्छ ।’
यसरी म बेश्या बनें शिर्षकको मेरो कथा पढेर धेरै राम्रा प्रतिकृया आए । जसमध्य एकजना गणेश नामका ब्यक्तीले पढाएको मेलमा भनिएको थियो । ‘तिम्रो रेट कति हो, म बिदेशमा छु तिमी संग सेक्स गर्न मन लाग्यो, जति पैसा भन्छौ त्यती दिन्छु ।’ अव भनौं त्यो कथा एकजना केटिले जीवनमा गर्नु परेको पिडादायी संघर्ष थियो, धेरैले बुझेपनि हाम्रो समाजमा यस्ता धेरै गणेशहरु छन् जो संग पाएँ भने म पनि किन छोड्ने, यस्तो अप्ठ्यारोमा रैछे अलिकती पैसा दिएत मानिहाल्छेनी भन्ने मानसिकता छ । उनले कथा कसले लेख्यो को हो तिर भन्दा पनि आफ्नो मानसिकता प्रस्तुत गरे । यहि युवकले भोली बिहे गरेपछि आफ्नो श्रीमतीलाई बलत्कार गर्ला कि नगर्ला ?
श्रीमती भनेको नै निशुल्क सेक्स गर्ने साधन सम्झनेहरु धेरै छन् जानेर नजानेर । जो पुरुष आफु सेक्सको चाहारामा हिंड्छ उसले श्रीमतीको खुब चियो चर्चो गरिरहेको भेटिन्छ । जवकी अधिकांस महिलाहरु संभोगका लागि तव मात्र तयार हुन्छन् जव उसको मनमा त्यो पुरुषप्रति माया हुन्छ भने श्रीमानले श्रीमतीका लागि त झन् कति माया गर्नुपर्ला जवकी उसले आफ्नो सारा जीवन उसका लागि समर्पित गरेकी छ, श्रीमानका कमजोरीलाई नजरअन्दाज गरेर उसको ईज्जतमा आफुलाई बलि दिने नारीहरुमाथी बलत्कार हुनु सानो कुरा हो र ?
एउटै घरका लोग्ने स्वास्नी लोग्ने राती अवेर आएर सजिलै भन्छ यार साथीहरु थिए आउनै दिएनन् त्यो समय श्रीमानले यो बुझ्दैनन् कि साथी त बुढीका नि छन् उ पनि यो समय सम्म बाहिर बसेर आईभने मेरो मनले के ठान्छ ? कतियप बिबाहित पुरुषका साथीहरुले घर छिटो जाने केटालाई जोईटिङ्ग्रे नि भन्दा रहेछन् । यहि डरले श्रीमतीलाई भन्दा बढि समय साथीभाईलाई दिने गरेको पाईन्छ । पुरुष स्वाभिमान भनेको आफ्नी स्वास्नी संग नझुक्नु हो र ? श्रीमतीको महत्वलाई प्रेम गरेर सकेजति माया र साथ दिनेहरु पो पुरुष । एउटी नारीको मनमा बस्न पाउनुनै पुरुषको ठुलो भाग्य हो, उसले जति प्रेम दिन्छ श्रीमतीले बदलामा उसलाई लाखौं गुणा बढि माया गर्न सक्छे । किनकी स्वभावैले नारी कोमल हुन्छन् । सबै पुरुषले आफ्ना श्रीमतीलाई यसरी माया गरिदीउँ की कहिल्यै श्रीमतीको मन र कानुनी दायरामा आफु बलत्कारीका रुपमा उभिनु नपरोस् ।हिमाल पोस्ट बाट साभार